I-PV Cable Harness Suppliers kunye neFektri - China PV Cable Bopha abavelisi
I-4to1 MC4 Y yeSebe eliDibanisa iSolar yePhaneli yokuDibanisa ngokuDibeneyo
I-4to1 MC4 Y yeSebe eliDibanisa iSolar Panel Solar Parallel Connection (1 Set = 4Male1 Female + 4Female 1Male) sisibini sezidibanisi ze-MC4 zeepaneli zelanga. Isinxibelelanisi esinye esivela kwiiModyuli ze-PV, .Isinxibelelanisi sesebe se-4Y sinokulingana zonke iiphaneli zelanga ze-MC4 Type Photonic Universe.Iyi-IP67 eyi-100% engenamanzi IP67, ukuze isetyenziswe ngaphandle kuyo nayiphi na imeko yemozulu.
Uqhagamshelo lwe-IP67 olufanayo 1 ukuya ku-3 Y Uhlobo lwe-Y Yesebe lePV Solar Power Connector
Uqhagamshelo lwe-IP67 oludibeneyo 1 ukuya ku-3 Y Uhlobo lweSebe PV Solar Power Connector (1 Set = 3Male1Female + 3Female1Male) sisibini sokudibanisa intambo ye-MC4 yeepaneli zelanga. Ezi zihlanganisi zihlala zisetyenziselwa ukudibanisa iipaneli ezintathu zelanga kunye nokunxibelelana okufanayo, kulunge kunye ne-MC4 Amadoda amaDuna angatshatanga Isidibanisi esivela kwiiModyuli ze-PV. Zingasetyenziselwa ngaphandle nakweyiphi na imeko yemozulu.
2to1 MC4 Y Isinxibelelanisi esiDibanisa iiPaneli zelanga kunye nokufana okanye uthotho
I-2to1 MC4 Y Isinxibelelanisi esiDibanisa iiPaneli zelanga ngokufana okanye ngochungechunge (1 Cwangcisa = 2Amadoda1Olibhinqa +2Ibhinqa1Male) sisibini sokudibanisa intambo ye-MC4 yeepaneli zelanga. Ezi zihlanganisi zihlala zisetyenziselwa ukudibanisa iipaneli ezimbini zelanga kunye nokunxibelelana okufanayo, kulunga ne-MC4 Amadoda amaDuna angatshatanga Isidibanisi esivela kwiiModyuli ze-PV. Esi sihlanganisi sesebe se-2Y sinokulingana zonke ii-MC4 Type Photonic Universe solar panels. Yi-100% engenamanzi (IP67), Zingasetyenziselwa ngaphandle nakweyiphi na imeko yemozulu.
1000V 1500V OEM Elungiselelweyo MC4 Solar Extension Cable kunye DC isinxibelelanisi okungangenwa Male Male
I-1000V 1500V ye-OEM eChongiweyo ye-MC4 Solar Extension Cable ene-DC Isinxibelelanisi Samanzi esingamanzi Amabhinqa isetyenziswa kwinkqubo ye-PV yeSolar phakathi kwepaneli yelanga kunye ne-Inverter okanye ibhokisi yolawulo. Zixhathisa nge-UV kunye ne-IP68 engenamanzi, inokusebenza ngaphandle kangangeminyaka engama-25. Ngokubalulekileyo, i-MC4 Extension Cable inokuba yi-OEM kubude obahlukeneyo kunye nobungakanani beentambo njengoko ufuna.
I-Auto Wire Car Extender Connector 2 Pin SAE Ibhetri
Iintambo ze-SAE kulula ukuzidibanisa kwaye zinqamule, ziguqule ukubambelela.Ilungele ukudityaniswa kwebhetri yelanga kunye nokutshintshelwa, kunye nokudluliselwa kweebhetri zeemoto njl njl iintambo ze-SAE zenzelwe ukongeza intambo kwitshaja yebhetri kunye nezixhobo ezinesixhumi se-sae. , amandla elanga kunye neemoto.
Cable ye-50A ye-60V kunye ne-Andersons Power Adapter
I-50A 600V Andersons Power Connector Adapter Cable ingasetyenziselwa ukhuseleko kunxibelelwano lwezinto zokusebenza, iiNkqubo zeSolar PV, izixhobo eziqhutywa ngamandla, iiNkqubo zeUPS, izithuthi zombane, amandla ezonyango e-AC / DC njl njl. NjengoAnderson kwisinxibelelanisi seMC4, uAnderson ukuya kwisiphelo seRingi, uAnderson kwisiqwengana seAlligator, uAnderson kwisikhanyisi seCigarette kunye nezinye iintambo zombane zeOEM.
I-Yellow Green Wire 4mm 6mm iCopper yeSiseko soMhlaba esiSiseko
Ikhebula leYellow Green 4mm 6mm iCopper Solar Grounding Cable isetyenziselwa iipaneli zelanga zokuveliswa kwamandla kunye nezinto ezinxulumene nokuxhuma, ngokukodwa ezifanelekileyo ngaphandle.Ukuxhathisa ukukhanya kwelanga, ukulwa nokuguga, Ukusebenzisa umsi ophantsi we-halogen-free flame retardant materials, ibanga eliphezulu, ukhuseleko ngakumbi.